Ogaden News Agency (ONA) – Ergooyinka iyo xubnihii shir weynaha ururka OYSU oo ku soo qulqulaya magaalada San Diego
Ururka Midowga Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia ayaa wuxuu toddobaadkan qabanayaa shir weynihii sannadka oo lagu qabanayo magaalada San Diego ee gobolka California iyada oo uu si toos u furmi doono haddii alle idmo May 22keeda. Shirkan ayaa waxaa la rejeynayaa iney kasoo qayb-galaan in kabadan 100 qof oo isugu jira xubno iyo marti sharaf ka kala imanaya dunida dacaladeeda.
In kastoo la rajeynayo iney xubnaha badankoodu iman doonaan ayaamaha soo socda, haddana waxaa baryahan magaalada kusoo qulqulaya martida qaybaheedii hore oo si diirran loo soo dhoweeyey.
Ururka OYSU oo ah urur dhalinyaro ayaa hindisihuusu yahay inuu is’garab taago shacbiga Soomaalida Ogadenia ee gumeysiga Ethiopia ku hoos jira, isla markaana qiimeeyaan xaaladda shacbku ku jira si xal waara loogu soo dabaalo.
Dhulka Soomaalida Ogadenia ayaa ah dhul gabi ahaanba ka daboolan dunida isla markaana aan loo ogalayn saxaafadda madaxa bannaan, hay’adaha samafalka iyo kuwa aan dawliga ahayn kadib markii ay xukuumadda Ethiopia ku soo rogtay cunaqabatayn dhan walba ah. Dawladda Ethiopia ayaa xasuuq ba’an dil, kufsi, dhac iyo barakicin joogta ah ku haysa shacabka, falkaas oo qaar kamid ah hay’adaha xuquuqul insaanku ugu yeedheen ‘xasuuqii qarsoonaa’.
Shir weynaha sannadkan ayaa wuxuu kusoo aadayaa xili ay shacbiga Soomaalida Ogadenia u baahan yihiin qaylo dhaan xooggan si dhibaatooyinkooda loo gaadhsiiyo aduun weynaha. Taas oo ururka OYSU uu ku talo jiro inuu qayb weyn ka qaato si codkoodu meel walba u gaadho.
Faah faahin dheeraad ah fadlan kala xiriir:
OYSU Worldwide bogga Facebook
OYSU 3rdAnnual International Conference bogga Facebook